Iwu kuki - Ndị na -akwado E -mbupụ
Iji mee webụsaịtị anyị kacha mma ma melite ahụmịhe onye ọrụ gị, anyị na -eji kuki na propars.net dị ka ọtụtụ weebụsaịtị. Iwu ojiji kuki a ("amụma") na -akọwara ndị ọbịa na ndị ọrụ webụsaịtị anyị ụdị kuki a na -eji yana ọnọdụ ndị dị a.
Kuki bụ obere faịlụ ederede echekwara na webụsaịtị ị gara na kọmpụta gị ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka na -echekwa na ngwaọrụ gị ma ọ bụ sava netwọkụ.
Kedu ụdị data ahaziri na kuki?
Dabere n'ụdị kuki na weebụsaịtị, a na -anakọta data gbasara ihe nchọgharị gị na mmasị mmasị na ngwaọrụ ị gara na webụsaịtị ahụ. Data a gụnyere ozi gbasara ibe ị nweta, ọrụ na ngwaahịa ị na -ele, asụsụ masịrị gị, yana mmasị gị ndị ọzọ.
Maka ebumnuche ndị a na -eji kuki?
Obere faịlụ ndị a nwere asụsụ ị họọrọ na ntọala ndị ọzọ na saịtị ahụ na -enyere anyị aka icheta mmasị gị oge ọzọ ị gara na saịtị ahụ wee meziwanye ọrụ anyị iji melite ahụmịhe gị na saịtị ahụ. Yabụ ị nwere ike nweta ahụmịhe ojiji ka mma yana ahaziri iche na nleta gị ọzọ.
Ebumnuche bụ isi nke iji kuki na weebụsaịtị anyị bụ ndị a:
Ịbawanye arụmọrụ nke weebụsaịtị
Iji melite ma kwado ọrụ enyere gị site na saịtị ahụ,
Iji nye atụmatụ ọhụrụ na saịtị ahụ na iji hazie atụmatụ dị ka mmasị gị si dị,
Iji hụ na nchekwa iwu na azụmaahịa nke gị na ụlọ ọrụ anyị,
Iji gbochie azụmahịa aghụghọ na saịtị,
Iji mezuo ọrụ ya dị ka iwu na nkwekọrịta si dị, ọkachasị ndị na -esite na Iwu Nke 5651 na Iwu Mgbasa Ozi emere na Internetntanetị na ịlụso mpụ ọgụ site na Mgbasa ozi ndị a, yana Iwu na usoro na ụkpụrụ gbasara usoro mgbasa ozi emere na. Ịntanetị.
Ụdị kuki na usoro nke oge nchekwa:
Kuki nnọkọ na -ahụ na weebụsaịtị na -arụ ọrụ nke ọma n'oge nleta gị. A na -eji ha maka ebumnuche dị ka ịhụ na nchekwa na ọganiihu nke saịtị anyị yana ọbịbịa gị. Kuki nnọkọ bụ kuki nwa oge, a na -ehichapụ ha mgbe ị mechiri ihe nchọgharị gị wee laghachi na saịtị anyị, ha anaghị adịgide adịgide.
Kuki na -adịgide
Kuki ndị a na -enyere weebụsaịtị anyị aka icheta ozi na nhọrọ gị na ọbịbịa gị ọzọ. A na -echekwa kuki na -adịgide adịgide ọbụlagodi mgbe ị gara na saịtị anyị, mechie ihe nchọgharị gị ma ọ bụ malitegharịa kọmputa gị. A na -edebe kuki ndị a n'ime folda nchekwa ihe nchọgharị gị ruo mgbe ehichapụ ha na ntọala ihe nchọgharị gị.
Ụdị kuki na Usoro ojiji:
Kuki nke Mbụ na nke atọ:
Kuki ndị mbụ bụ kuki saịtị anyị na-eji. Kuki ndị ọzọ bụ kuki arụnyere na kọmputa gị na -abụghị saịtị anyị. A na -eji kuki nke mbụ na nke atọ na weebụsaịtị anyị.
Enwere ike ịkekọrịta data gị n'ihi nleta gị na webụsaịtị anyị na ndị mmekọ azụmaahịa anyị, ndị na -ebubata ngwaahịa, ụlọ ọrụ gọọmentị nyere ikike na ndị mmadụ n'otu n'otu kwekọrọ na ọnọdụ nhazi data nkeonwe yana ebumnuche akọwapụtara na edemede 8 na 9 nke Iwu KVK, n'ahịrị. na ebumnuche nke ịhazi data nkeonwe gị.
Kuki amanyere bụ iwu:
Kuki amanyere bụ kuki ndị dị mkpa maka weebụsaịtị ka ọ rụọ ọrụ nke ọma. A na -eji kuki mmanye iji jikwaa sistemụ nke ọma, mepụta akaụntụ onye ọrụ wee banye, wee gbochie azụmahịa aghụghọ. Enweghị kuki ndị a, weebụsaịtị agaghị arụ ọrụ nke ọma.
Kuki ọrụ bụ kuki eji eme ka nleta gị gaa na weebụsaịtị wee melite ahụmịhe gị na weebụsaịtị. Kuki ndị a na -enye gị ohere ịnweta ọdịnaya ahụ ngwa ngwa site na icheta nleta gara aga na weebụsaịtị.
Kuki nyocha nwere data nke na -enye anyị ohere ịhụ nke n'ime ibe anyị na -adọta nlebara anya karịa, nke akụ a na -elele karịa, nke ahụ na -enyekwa anyị ohere ịnye ọrụ dabara maka okporo ụzọ a site n'ịhụ okporo ụzọ na saịtị anyị. Kuki ejiri ụdị a na -echekwa ozi n'amaghị ama.
Kuki mgbasa ozi:
Mgbasa ozi ma ọ bụ ịchekwa kuki bụ kuki na -enyere anyị aka ịchọpụta ma nyefee ọdịnaya dị gị nso. Enwere ike itinye kuki mgbasa ozi ndị ọzọ na webụsaịtị anyị, saịtị mkpanaka na weebụsaịtị ndị ọzọ ebe anyị na-akpọsa, ka anyị wee mara gị wee nye gị mgbasa ozi ahaziri iche. A na -ejikwa kuki ndị a iji tụọ arụmọrụ nke mgbasa ozi anyị.
Ewezuga kuki dị mkpa na nke mbụ nke saịtị anyị na -eji, kuki eji bụ ndị a:
Nchịkọta Google bụ ngwa nyocha weebụ na -enyocha etu ndị ọrụ si eji weebụsaịtị. Na mgbakwunye na ozi na-enweghị aha, data nkeonwe gbasara otu i si eji webụsaịtị (aha, adreesị, akara ekwentị, adreesị ozi-e, adreesị IP) na ihe nchọgharị gị zigara Google ma chekwaa ya na Google.
Kedu ka ị ga -esi egbochi ojiji kuki?
Imirikiti ihe nchọgharị na -anabata kuki na -akpaghị aka. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ, ị nwere ike jụ kuki site na ịgbanwe ntọala ihe nchọgharị gị. Biko rịba ama na ọ bụrụ na ị jụ kuki, ụfọdụ atụmatụ na ọrụ dị na saịtị anyị nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma, saịtị anyị nwere ike ọ gaghị ahaziri onwe ya ma hazie ya dịka ahụmịhe gị.
Ị nwere ohere ịhazi mmasị gị gbasara kuki site n'ịgbanwe ntọala ihe nchọgharị gị. Ndị na -emepụta ihe nchọgharị na -enye ibe enyemaka maka ijikwa kuki na ngwaahịa ha. Maka ozi ndị ọzọ biko pịa:
Ngwa Safari Mobile:
Kpọtụrụ anyị ka anyị ziga ajụjụ gị niile na nkọwa gị gbasara Iwu Kuki!